Iyo Arduino IDE 2.0 beta yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo | Linux Vakapindwa muropa
Chikwata cheArduino chakaburitswa mazuva mashoma apfuura kuburikidza neshambadziro iyo vhezheni 2.0 (beta) yeArduino IDE inowanikwa kurodha pasi uye kuti kodhi yayo marekodhi ari kuve akavhurwa sosi.
Pakati pezvinhu zvitsva zvinoratidzwa, zvinotaurwa kuti mabasa epamberi anopiwa, chiitiko chiri nani chevashandisi uye kukurumidza kuunganidza nguva, kunze kwaizvozvo sezvazvakanyorwa zvichinzi: mupepeti anoratidza (pakupedzisira) kugadziridza kwekuchinja uye mashandiro zvinoenderana nemaraibhurari avakaisa.
1 Nezve Arduino
2 Chii chitsva muArduino 2.0 IDE Beta?
Kune avo vasingazive nezveArduino, iwe unofanirwa kuziva kuti iyi software uye kambani yekuvandudza zvigadzirwa uye kuti inopa iyo IDE inotsigira anodarika chiuru mabhodhi ekuvandudza emhuri yeArduino, yepamutemo kana kwete.
Kusvika ikozvino, eIyo Arduino IDE inopa yakapusa uye yakajeka interface, Zvakakwanira vashandisi vazhinji, kusanganisira izvo zvitsva kuchikuva.
Nepo vashandisi vane ruzivo vachizvitsoropodza nekuda kwekugona kwayo kushomeka zvichienzaniswa nevapepeti vemazuva ano. Pamusoro pezvo, ivo vachiri kuda epamberi ekugadzirisa kugona, nekwanisi yekukwira kuburikidza nekodhi, tarisa zvinowirirana zvemukati, ndangariro, uye marejista kunzvimbo dzekupaza.
Iyo IDE mushanduro dzayo dzazvino 1.x inogadzirwa muJava, uye yayo monolithic kodhi base inoita kuti zviome kuita izvi zvakapfuura maficha pane akawanda mapuratifomu uye anoshanda masisitimu.
Code yakatanga kuita zvekare muna 2018 nekuchinja kukuru, pamwe nechimbo cheArudoino-ehl inopa zvese zvakakosha IDE maficha ayo vashandisi vemberi vanogona kusanganisa nehunyanzvi IDE yesarudzo yavo. Arduino-ehl yakanyorwa muGolang.
Muna 2019, iyo "Arduino pro IDE" yakaburitswa muAlpha vhezheni. Iyi IDE nyowani yakavakirwa pane arduino-ehl yakavakirwa pane yazvino software stack (Theia uye Electron).
Chii chitsva muArduino 2.0 IDE Beta?
Sezvambotaurwa pakutanga, iyo itsva Arduino 2.0 IDE ine yakawanda yemazuva ano edhari Kupfuura akautangira, chimiro chayo chave kuterera, asi ivo vagadziri vanoti izvo shanduro dzichamhanyawo nekukurumidza kupfuura nakare. Kunyangwe pakutanga kuona, mupepeti mutsva anotaridzika zvakafanana neiyo yekare, semuenzaniso, bhawa rine mabhatani ekuona uye kurodha kodhi yakachengetedzwa.
Iyo bhodhi ichagadziridzwa ikozvino inogona kugadzirisirwa ipapo zvakananga. Iyo yepadivi bar iri nyowani, ine debugging, iyo dashibhodhi uye maneja wemaraibhurari, iyo inopa matatu anobatsira mabasa uye zvakare inoreva kune ekugadzirisa sarudzo
Chimwe chiitiko Izvo zvinomira kunze kweiyi beta vhezheni yeArduino IDE 2.0, ndizvo izvo ine mhenyu debugger, zvichiita kuti zvive nyore kuwana bugs mune kodhi snippets.
Breakpoints inogona kumisikidzwa padhigi rekugadzirisakuitira kuti zvikanganiso zvikwanise kubatwa mune chimwe chidimbu chekodhi uye akasiyana anogona kugadziriswa panguva yekugadzirisa. Iyo debugger inotsigira ese Arduino mabhodhi anomhanya pane SAMN uye Mbed mapuratifomu, nepo mamwe mapato emapato echitatu, tevera tekinoroji yekumisikidza kugadzirisa iyo debugger.
Pakupedzisira, timu yeArduino inotaura kuti kuvandudzwa kweArduino IDE 2.0 kwave kugona nekuda kwezvipo nekutengwa kwemabhodhi epakutanga eArduino.
Vagadziri vakabhadharwa neizvi kuti vashande pane yakavhurwa sosi software.
Iyo beta vhezheni inogona kutorwa pasi paWindows x86-64bit, Linux, kana macOS, kunyange Arduino ichiri kudaidzira software yekuyedza uye ichikuyambira nezve zvingangoitika zviputi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo Arduino IDE 2.0 beta yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo